Miatrika an'i Torino ny amboadia rehefa avy nandehandeha teny amin'ny arabe mora nahita an'i Pyunik | 1xbet
Aorian’ny mpitsidika Armeniana manetriketrika loatra eto, dia hanomboka hiady varotra amin’i Torino i Wolves amin’ny herinandro ambony miaraka amin’ny torino amin’ny sokajy ligin’i Europa League. Amin’izay fotoana izay dia hiharatsy tokoa ny raharaha; Rivotra mahafinaritra ity. Nuno Espírito Santo sy mpankafy manodidina ny 30000 no nijery tamim-pifaliana rehefa nandresy tamin’ny amboara 8-0 an’i Pyunik ny ekipa Wolves tanora noho ny fahitana hafaliana 10 minitra tamin’ny tapany faharoa.
mialoha, milaza fa ny iray amin’ireo ekipa kely indrindra amin’ny Premier League dia nahazo tanjaka nampahery tamin’ny lalina. Pedro Neto sy Morgan Gibbs-White dia nanatratra ny tanjony voalohany ho an’ny klioba talohan’ny nanesoran’i Ruben Vinagre hetsika tsara hitakiana iray hafa.Diogo Jota dia nidina avy teo amin’ny dabilio mba hanisy fahatarana fahefatra mahatalanjona. Hisy trano feno iray ao anatin’ny tapa-bolana rehefa nampiantrano an’i Torino ry zareo amin’ny lalao faharoa taorian’ny lalao alakamisy ho avy izao any Italia. Ny amboadia dia mety tsy hiverina avy amin’izany miaraka amina firaka ahazoana aina toy ny teto. Ny fandresena azon’izy ireo tamin’ny isa 4-0 tany Armenia dia nidiran’izy ireo tamin’ity filalaovana ity fa tsy filalaovana firy fa efa ela kosa i Nuno no nanao ny diplaomasia tamin’ny fanizingizinana fa tsy azo raisina an-tànana ny lafiny Armeniana.Raha ialao indrindra ny hubris, dia toy izany ihany koa ny ratra, indrindra alohan’ny lalao mandroso, ary izany no antony nanombohan’i Nuno tamina filaharana tsy fantatra.
tao anatin’ny 14 andro ho an’ny Wolves, ao anatin’izany ny fifanandrinana misy tongotra roa miaraka amin’i Torino, ka nanao fanovana sivy i Nuno tamin’ny sisiny izay nanomboka ny fampielezan-kevitr’izy ireo tamin’ny fisarihana natao tany Leicester ny sabotsy lasa teo. Ny fanaovan-tsonia fahavaratra telo dia nanomboka ny voalohany ho an’ny klioba, ny roa tamin’izy ireo no nahatonga ny hery fitokonana.Neto, mpahay portiogey iray 19 taona, izay nanatevin-daharana an’i Lazio tamin’ny vidiny 16m, dia nahasarika indrindra fa ny mpiara-miasa aminy vaovao, ilay Italiana Patrick Patrick Cutrone, 21 taona, dia nahasarika ny masony ihany koa.
ny lamosina Jesus Vallejo, izay nanatevin-daharana ny indram-bola avy amin’ny Real Madrid taorian’ny nahazoany ny loka tamin’ny Espaniola U-21 tamin’ny fandresena tamin’ny Tompondakan’i Eraopa fahavaratra, dia nanomboka tamin’ny fiarovana afovoany. Io mpiambina aoriana io koa dia nahitana an’i Max Kilman, zazalahy 22 taona nanao ny laharam-pahamehana voalohany ho an’i Wolves – ny traikefa nananany teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia nisy satroka 25 ho an’ny ekipa futsal any Angletera. amin’ny alàlan’ny fanantenana fampielezan-kevitra eropeana tsy hay hadinoina. Azon’izy ireo resy lahatra mihitsy aza fa i Pyunik, nitafy akanjo fotsy rehetra, dia Real Madrid mandra-pahatongan’ny, nanomboka nilalao ireo mpitsidika.Na dia mahavita zavatra tsy dia misy dikany aza i Pyunik, tsy nanolotra fidirana sy fisiana kely ara-batana izy. Taorian’ny 10 minitra tippy-tappy tedium dia nanandratra ny tempo i Wolves ary saika nandray an-tanana.
Nandeha akaiky kely i Cutrone taty aoriana, nanapoaka volley ny tokontany iray taorian’ilay zoro Wolves izay niteraka korontana tao amin’ny faritry ny mpitsidika. Neto, izay miasa am-pifaliana mandritra ny taona manontolo, dia tokony ho nahavita tsara kokoa tamin’ny minitra faha-20 rehefa vaky taminy ny baolina teo amoron’ny faritra ary nibolisatra ny tifitra voalohany tany amin’ny Stan Cullis Stand izy.Minitra iray taty aoriana dia nanandrana naneho taminy ny fomba fanaovana azy i Romain Saïss fa ny daka nataony afaka 20 metatra kosa dia nibolisatra nihoatra ny paositra. Nolavin’i VAR i Leander Dendoncker sy Wolves tamin’ny lalao tsy nahitam-bokatra tany Leicester City. mifamatotra amina tanjona telo niasa tsara tao anatin’ny 10 minitra. Neto no nahatafiditra ny voalohany, nipaoka avy lavitra rehefa nahazo ny isa ambany nanoloana ny tanjon’i Cutrone. Avy eo Neto dia nifanaraka tamin’io serivisy io tamin’ny alàlan’ny fanomezana lakroa tonga lafatra avy any ankavia mankany Gibbs-White. Tonga haingana ilay zazalahy 19 taona mba hilomano tamin’ny tanjony voalohany ho an’ny Wolves avy lavitra. Adama Traoré dia nanangana ny laharana fahatelo tamin’ny alàlan’ny hazakazaka an-kavanana avy any ankavanana ary – tsy dia fahita firy avy aminy – pass tsara avy amin’ny byline.Nanampy azy hatrany Vinagre i Cutrone ho an’ny famaranana akaiky hafa. </P